Home News Musuqa ka jira gobolka Banadir iyo boobka hantida qaranka oo lugaha la...
Musuqa ka jira gobolka Banadir iyo boobka hantida qaranka oo lugaha la gashay Xafiiska RW Kheyre iyo eheladiisa (Cadeyno)
Sidii Muqadishu Online (MOL)idinkuugu soo gudbisay horaantii asbuucii hore cod laga duubay Gudoomiyaha Degmada Xamarweyne ee Gobolka Banaadir Mudane Cumar Shiikh Jeeg, codkaas oo uu gudoomiyahu uga hadlayay Muqus-maasuqa baahay ee ka jira Gobolka Banadir iyo boobka lagu hayo hatida qaranka, ayaa waxaa u suuragashay MOLin ay hesho xog rasmi ah oo cadaynayso in boobka hatida Gobolka Banadir uu ka danbeeyo Ra’iisal Wasaare Xassan Cali Kheyre. Ma aha markii ugu horeeysay ee RW Kheyre uu dhaco ama horseed ka noqdo boobka hantida qaranka, laakiin talabada ugu danbeeysay ee uu qaaday ayaa ah mid uu ka tagay hishood islamarkaana si aan gabasho lahayn u isticmaalayo awooda xafiiska Ra’iisal Wasaaraha.
Sida aad ku arkaysaan video hoose, gudoomiyaha Degamada Xamarweyne ayaa ka dhiidhiyay dhaca loo gaysanayo dhulka ku yaalo baratamaha magaalada Muqadishu. Dhaca dhulka ee uu Gudoomiyaha sheegay waxaa soo amray Ra’iisal Wasaare Kheyre isaga oo soo marsiiyay Gudoomiye ku xigeenka dhanka Maalinyada ee Gobolka Banadir, ninkaas oo ay ilma adeer yihiin. Sida ku cad qoraalka hoos ku qoran ee sumadiisu tahay DH/malk/Q/M/M/02/5298/018 taas uu Gudoomiyuhu ku farayo in dhulka sida sharci darada lagu bixiyay ay dhisi doonto shirkada lagu magacaabo IPECO oo leeyihiin ganacsadatada Ismaaciil Gooni iyo Cabdi Calioo ay ilma adeer yihiin RW Kheyre. Labadaan ganacsato ayaa sidoo kale waxa uu gacansi kala dhaxeeyaa RW Kheyre, waxaa kaloo ay maamulaan lacagaha RW Kheyre iyo ganacsigiisa gaarka ah. Ma aha kaliya in labadaan ganacsato la siiyay dhulka sharci darado ah, balse waxaa qandaraas lagu siiyay quudinta ciidanka qalabka sida oo ay ku qaataan bishii in ka badana 1.7 Milyan doolar. Waxaa la rumaysan yahay in lacagta inteeda badan lagu wareejiyo RW Kheyre.
Kusimaha Gudoomiyaha Gobolka Banadir Xuseen Maxamed Nuur oo ay qaraabo hoose yihiin RW Kheyre, adeerna ay u yihiin labada ganacsato ayaa ku adkaystay in dhulkaas dhismihiisa iyo lahaanshahiisaba lagu wareejiyo labada Ganacsato. Gudoomiye Xuseen ayaa waxa uu ka haystaa ogolaasho buuxda RW Kheyre kaas oo uu ku meelmarinayo rabitaanka RW Kheyre.
Dhanka kale Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Banadir ee hoowlaha Guud Mudane Aadan Shiikh Cali Fiidow ayaa isaga oo ay muuqato ku tagrifalka awoodeed iyo boobka qaawan ee hantida qaranka waxa uu soo saaray dikireetada sumadeedu tahay DH/ma/K/Q/H/a/02/5438/018 taas oo uu ku joojinayo burburtinta handtida gaarka loo leeyahay. RW Kheyre ayaa si toosa u soo faragaliyay arintaan kaas oo amar ku bixyay in fasax buuxa loo siiyo labada ganacsato in ay bilaabaan burbirinta iyo dhismaha dhulka.
MOL oo la xiriirtay Gudoomiyaha Gobolka Banadir Eng. Yariisow oo ku sugan dalka Turkiga safarna u soo ah magaalada Muqadishu ayaa sheegay in uusan waxba kala socon amarka lagu burburinayo hantida gaarka loo leeyahay. Eng. Yarisow ayaa sheegay in hanti si gaar ah loo leeyahay in aan la siin karin ganacsato gaar ah.Dhanka kale aabaha dhalay gudoomiyaha Degmada Xamar weyne shiikh Jeeg ayaa u sheegay warbaabhinta in si aan sharci ku dhisnaynin loola dhaqamay wiilkiisa, isla markaana lagu eedeeyay in uu ka horyimid amarka RW Kheyre iyo beesha uu ka dhashay.
halkaan ka dhagayso wareeysiga aabe Shiikh Jeeg:
Wareeysi aabe Shiikh Jeeg
Halkan ka aqriso qoraalada la xiriira boobka dhulka ee RW Kheyre iyo Eheladiisa
Sawirka ganacasata dhulka la siiyay iyo qandaraaska dhismaha
Previous articleDagaal Beeleedyo Ka Soo Cusboonaaday Deegaano Hoostaga Gobolka Sool
Next articleWasiiro Matalaya Dalalka Geeska Afrika Oo Gaaray Dalka Jabuuti
Xildhibaan Abukaate”Qas wadayashu Ma Heystan Tiro ku filan,Waxa ayna Donayan in...
Ciidamada Booliska Soomaliya Oo Gacanta Ku Dhigay Rag Afduubtay Caruur